အန်တိုနော့ဗ် အေအန်-၂၂၅ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘူရန်အာကာသလွန်းပျံအားကျောပိုးထားသည့် အေအန်-၂၂၅ လေယာဉ်အား ၁၉၈၉ ပါရီလေကြောင်းပြပွဲတွင်တွေ့မြင်ရပုံ
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု / ယူကရိန်း
၁၉၈၈၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁
အန်တိုနော့ဗ် အေအန်-၂၂၅ Mriya (ယူကရိန်း: Антонов Ан-225 Мрія, Dream, NATO reporting name: 'Cossack') သည် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု အန်တိုနော့ဗ်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့က ၁၉၈၀တွင် ပုံထုတ်ခဲ့သော မဟာဗျူဟာမြောက်ကုန်တင်လေယာဉ်ဖြစ်သည်။ အေအန်-၂၅၅၏အည် မရီယာ သည် ယူကရိန်းဘာသာစကားအရ အိပ်မက်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး၊ အလေးဆုံး(တန်ချိန် ၆၄၀လေးသည်)နှင့်ကုန်ချိန်အများဆုံးတင်နိုင်သောလေယာဉ်ဖြစ်သည်။
An-225 သည်မူလက ဘူရန်လွန်းပျံယာဉ်သယ်ပို့ရန်အတွက်အထူးတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အောင်မြင်ခဲ့သော Antonov An-124အား အကျယ်ချဲ့ထားခြင်းဖြစ် သည်။ ပထမဆုံး An-225 အား ၁၉၈၈ တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပြီး ဒုတိယမြောက်အစီးမှာတပိုင်းတစသာပြီးစီးသည်။ ပြီးစီးသွားသော An-225 အား အန်တိုနော့ဗ်လေကြောင်း( Antonov Airlines)တွင် ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောဝန်များသယ်ဆောင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ မှတ်တမ်းများအရ ကုန်တန်ချိန် ၁၈၉,၉၈၀ကီလိုဂရမ်(၄၁၃,၈၃၄ပေါင်)အထိတင်ဆောင်ဖူးသည်။.
၆ Notable appearances in media
အန်တိုနော့ဗ် အေအန်-၂၂၅ သည် ဆိုဗီယက်အာကာသစီမံကိန်းအတွက် အင်နာဂျီယာ(Energia)ဒုံးပျံနှင့် ဘူရန်အာကာသလွန်းပျံ( Buran )ကိုသယ်ဆောင်ရန်အတွက် Myasishchev VM-Tလေယာဉ်နေရာတွင်အစားထိုးနိုင်ရန် တည်ဆေက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ An-225 ၏မူလတာဝန်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ လွန်းပျံယာဉ်တင်လေယာဉ် နှင့်ရည်ရွယ်ချက်တူညီသည်။ 
၁၉၈၉ ပါရီလေကြောင်းပြပွဲတွင် ဘူရန်လွန်းပျံယာဉ်အားကျောပိုးထားသည့် An-225 အားတွေ့မြင်ရပုံ
An-225 ၏ ပထမဆုံးအကြိမ်ပျံသန်းမှုအဖြစ် ၁၉၈၈၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ တွင် ကိယက်ဗ်မြို့မှ ၇၄ မိနစ်ကြာပျံသန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ ပါရီလေကြောင်းပြပွဲတွင် ရပ်ထားလျက်အနေအထားဖြင့်ပါဝင်ပြသခဲ့ပြီး ဖာဘိုရိုလေကြောင်းပြပွဲတွင် အများပြည်သူရှေ့ပျံသန်းပြခဲ့သည်။ လေယာဉ်နှစ်စီးအမှာရရှိခဲ့သော်လည်း တစ်စီးသာတည်ဆောက် ပြီးစီးခဲ့သည်။ ) ၂၅၀,၀၀၀ ကီလိုဂရမ်(ပေါင် ၅၅၀,၀၀၀)အထိအလွန်လေးလံပြီးကြီးမားသောပစ္စည်းများကို ဝမ်းခေါင်းအတွင်းသယ်ဆောင်နိုင်သည်။  သို့တည်းမဟုတ် ၂၀၀,၀၀၀ ကီလိုဂရမ်(ပေါင် ၄၄၀,၀၀၀)လေးသောပစ္စည်းများကိုကျောပိုးသယ်ဆောင်နိုင်သည်။ 
ဒုတိယမြောက် An-225 အား ဆိုဗီယက်အာကာသစီမံကိန်းအတွက် ၁၉၈၀ နှောင်းပိုင်းတွင် တစိတ်တပိုင်းတည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ဒုတိယမြောက် An-225 တွင် နောက်ဖက်ကုန်ပေါက်နှင့် ပြန်လည်ပုံစံထုတ်ထားသော တစ်ခုတည်းသော ဒေါင်လိုက်ဟန်ချက်ညှိ အမြီးပါရှိသည်။ ပိုမိုထိရောက်သောကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဖြစ်သည်။  ၁၉၉၁ တွင် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုပြိုကွဲပြီးနောက် ဘူရန်အာကာသလွန်းပျံစီမံကိန်းဖျက်သိမ်းလိုက်ချိန်တွင် တစ်စီးတည်းသော An-225 အား ၁၉၉၄ တွင် သိမ်းဆည်းထားခဲ့သည်။  Ivchenko Progress အင်ဂျင် ၆ လုံးအား An-124 လေယာဉ်များတွင်အသုံးပြုရန် ဖြုတ်ယူခဲ့သည်။ မပြီးစီးသေးသော An-225 ကိုယ်ထည်အားလည်းသိမ်းဆည်းထားခဲ့သည်။ ပထမ An-225 အား အင်ဂျင်ပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီး အသုံးပြုခဲ့သည်။ 
၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် An-225 ၏စွမ်းရည်မြင်သာလာပြီး ၂၀၀၆စက်တင်ဘာတွင် ဒုတိယမြောက်အစီးကိုအပြီးသတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒုတယအစီး၏ကိုယ်ထည်ကို ၂၀၀၈ တွင်အပြီးသတ်ရန်ဖြစ်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်အချိန်ဆွဲသွားခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ဩဂုတ်တွင် တပ်ဆင်ခြင်းမပြီးသေးသဖြင့် လုပ်ငန်းရပ်တန့်ခဲ့သည်။  ၂၀၁၁၊ မေတွင် အန်တိုနော့ဗ် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က ဒုတိယမြောက် ကုန်တန်ချိန် ၂၅၀ တင်ဆောင်နိုင်သော An-225 ပြီးစီးရန်အတွက် $သန်း ၃၀၀ လိုအပ်မည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ ဘဏ္ဍာငွေရရှိပါက သုံးနှစ်အတွင်းအပြီးသတ်နိုင်မည်ဟုဆိုသည်။  အမျိုးမျိုးသော သတင်းရင်းမြစ်များအရ ဒုတိယမြောက်အစီးသည် ၆၀-၇၀% ပြီးစီးပြီဖြစ်သည်။ .
အန်တိုနော့ဗ် ကုမ္ပဏီ၏ ရှေးဦးပိုင်း An-124 ပေါ်အခြေတည်၍ An-225 တွင် ကိုယ်ထည်ပြွန်ရှေ့ပိုင်းနှင့်တောင်ပံ၏ပဲ့ပိုင်းဖက်သို့ချဲ့ထားပြီး ဗျက်ကျယ်ကျယ်ရရှိစေသည်။ တောင်ပံတွင်Ivchenko Progress D-18T တာဘိုပန်ကာအင်ဂျင် နှစ်လုံးထပ်ထည့်သဖြင့်စုစုပေါင်းအင်ဂျင် ၆ လုံးပါဝင်လာသည်။ ဆင်းသက်ဂီယာစနစ်ကို ဘီး ၃၂ လုံးဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ဘီးအချို့အားကွေ့နိုင်ပြီးလေယာဉ်ကို ၆၀ မီတာကျယ်သောပြေးလမ်းပေါ်တွင်ကွေ့နိုင်လေသည်။ ဆင်းသက်ဂီယာသည် လေယာဉ်အားဒူးထောက်စေနိုင်ပြီး ကုန်တင်/ချလွယ်ကူစေသည်။  အလေးချိန်လျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် An-124 ၏အမြီးပိုင်းကုန်ပေါက်တံခါးနှင့်လှေကားတို့ကိုဖြုတ်ထားသည်။ အမြီးပိုင်းတွင် ဒေါင်လိုက်ဟန်ချက်ညှိဆူးတောင်အစား ကြီးမားလေးလံသောကုန်များကိုကျောပိုးသယ်ရာ၌ ကုန်များကလေကြောင်းဒိုင်းနမစ်ကိုနှောက်ယှက်သဖြင့်အဆင်မပြေ၊ အမြွှာဆူးတောင်နှင့်မှအဆင်ပြေသည်။ An-124 နှင့်မတူသည်မှာ An-225 သည် ဗျူဟာမြောက်ကုန်တင်ရန်၊ ပြေးလမ်းတိုတွင်ဆင်းတက်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပေ။
An-225 Ivchenko Progress D-18T တာဘိုပန်ကာအင်ဂျင်များ
အစပိုင်းတွင် An- 225 သည် စုစုပေါင်းအလေးချိန် ၆၀၀တန်(၁,၃၀၀,၀၀၀ပေါင်)ရှိသည်။ ၂၀၀၀-၁ တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၂၀ အကုန်အကျခံပြီးမွမ်းမံမှုပြုရာ၌ အားဖြည့်ကြမ်းပြင်တစ်ခုထပ်ထည့်ရာ တန်ချိန် ၆၄၀(ပေါင် ၁,၄၀၀,၀၀၀)ရှိလာသည်။ .
Both the earlier and later takeoff weights establish the An-225 as the world's heaviest aircraft, being heavier than the double-deck Airbus A380 even though Airbus plans to pass the An-225's maximum landing weight with ၅၉၁.၇ tonne (၁,၃၀၄,၀၀၀ ပေါင်) for the A380. The Boeing 747 Dreamlifter hasabigger cargo hold at 1,840m3 (65,000 cubic feet). The Hughes H-4 Hercules, known as the "Spruce Goose", hadagreater wingspan andagreater overall height, but was 20% shorter, and due to the materials used in its construction, also lighter. In addition, the Spruce Goose only flew once, making the An-225 the largest aircraft in the world to fly multiple times.
The pressurized cargo hold is 1,300m3 in volume; 6.4m wide, 4.4m high, and 43.35m long – longer than the first flight of the Wright Flyer.
Antonov An-225 အား ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် မန်ချက်စတာလေဆိပ်တွင်တွေ့မြင်ရပုံ
၁၉၇၀ နှောင်းပိုင်းတွင် In the late 1970s, efforts were begun by the Soviet government to generate revenue from its military assets. In 1989,aholding company was set up by the Antonov Design Bureau asaheavy airlift shipping corporation under the name "Antonov Airlines", based in Kiev, Ukraine and operating from London Luton Airport in partnership with Air Foyle HeavyLift.
As the Soviet space program was in its last years, the An-225 was employed as the prime method of transporting the Buran Shuttle.[ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရင်းမြစ် လိုအပ်သည်]
On 23 May 2001, the An-225 received its type certificate from the Interstate Aviation Committee Aviation Register (IAC AR). In September 2001, carrying4main battle tanks atarecord load of ၂၅၃.၈၂ tonne (၂၇၉.၇၉ short ton) of cargo, the An-225 flew at an altitude of ၂ km (၆,၆၀၀ ft) overaclosed circuit of ၁,၀၀၀ km (၆၂၀ mi) ataspeed of ၇၆၃.၂ km/h (၄၇၄.၂ mph).
Antonov An-225 အား ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် တွေ့ရပုံ
The An-225 has been contracted by the Canadian and U.S. governments to transport military supplies to the Middle East in support of Coalition forces. In November 2004, FAI placed the An-225 in the Guinness Book of Records for its 240 records. An example of the cost of shipping cargo by An-225 was over2million DKK (approx. €266,000) for flyingachimney duct from Denmark to Kazakhstan in 2008.
On 11 August 2009, the heaviest single cargo item ever sent via air freight was loaded onto the Antonov 225. At ၁၆.၂၃ မီတာ (၅၃.၂ ပေ) long and ၄.၂၇ မီတာ (၁၄.၀ ပေ) wide, the consignment–a generator foragas power plant in Armenia and its loading frame–weighed in atarecord ၁၈၉ tonne (၄၁၇,၀၀၀ ပေါင်). Also during 2009, the An-225 was painted inanew blue and yellow paint scheme, after Antonov ceased cooperation with AirFoyle and partnered with Volga-Dnepr in 2006.
၂၀၁၀၊ ဇွန် ၁၁ တွင် An-225 ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံးကုန်စည်ကိုသယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၄၂ မီတာရှည်သည့် လေအားတာဘိုင်နှစ်ခုကို တရုတ်နိုင်ငံ ထျန်းကျင်းမြို့မှ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အန်တိုနော့ဗ်လေကြောင်း (ဆိုဗီယက် ဘူရန်စီမံကိန်း( Buran program)အတွက်)
အကြီးဆုံးလေယာဉ် ၄ စီးအားယှဉ်ပြထားပုံ-
၂၀၀၈၊ စက်တင်ဘာတွင် An-225 အားတွေ့ရပုံ
Notable appearances in media[ပြင်ဆင်ရန်]
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - Aircraft in fiction#Antonov An-225
↑ ၁.၀ ၁.၁ "World's largest aircraft, An-225, emerges to set new lift record". Flight International, 17 August 2009.
↑ ၂.၀ ၂.၁ Cargo manifest picture Air Cargo News 13 November 2009. Retrieved: 30 May 2012.
↑ ၃.၀ ၃.၁ Ukraine's An-225 aircraft sets new record for heaviest single cargo item transported by air, Eye for Transport, 18 August 2009.
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ Greg Goebel။ Antonov An-225 Mriya ("Cossack")။ The Antonov Giants: An-22, An-124, & An-225။ 21 August 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Greg Goebel။ The Soviet Buran shuttle program။ Postscript: The Other Shuttles။ 21 August 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇.၀ ၇.၁ Mriya။ Antonov ASTC။ 27 May 2004 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Kaplan, Philip. "Big Wings".
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ ၁၁.၂ ၁၁.၃ ၁၁.၄ An-225 (An-225-100) "Мрія" Russian Aviation Museum, 20 October 2001. Retrieved: 31 October 2010.
↑ "$300m needed for completion of An-225 transport, says Antonov CEO"
↑ Ukraine may finish the construction of second An-225 Mriya transport aircraft – News – Russian Aviation။ Ruaviation.Com။ 2012-04-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Airbus Reveals A380-linked Pilot Systems Secrets" (3 June 2009).
↑ ၂၁.၀ ၂၁.၁ Antonov An-225 Mryia (Cossack)။ The Aviation Zone။ 2011-07-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; name "avzone" defined multiple times with different content
↑ "AN-225 Mriya" GlobalSecurity.org. Retrieved:6September 2012.
↑ "Antonov An 225 Archived 15 April 2012 at the Wayback Machine." Air Charter Service. Retrieved:6September 2012.
↑ "Milestones of Flight – 1903 Wright Flyer" – Smithsonian National Air and Space Museum
↑ An-225 Mriya, NATO: Cossack။ Goleta Air & Space Museum။ 31 March 2004 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Type Certificates for Aircraft။ 30 April 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 April 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Special planes: The Antonov-225 "Mriya"" (8 April 2006). European Tribune.
↑ Antonov Airlines:An-225 Mriya။ AirFoyle။5October 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၁.၀ ၃၁.၁ Antonov An-225။ Aircraft-Info.net။ 1 April 2004 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 February 2004 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Steelcon News Archived 16 July 2011 at the Wayback Machine.. steelcon.com. Retrieved: 13 June 2010.
↑ Spotters.net (2009)။ Photo of the AN-225 in new paint scheme။ 30 December 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Record breaking journey Archived 14 June 2010 at the Wayback Machine. Renewable Energy Sources, 11 June 2010. Pictures:  Archived9November 2016 at the Wayback Machine.  Archived 13 June 2013 at the Wayback Machine. Retrieved: 13 June 2010.
Antonov An-225 (ကဏ္ဍ)
An-225 – YouTube.com The worlds biggest planes: Antonov An-225 in comparison with Airbus A380-800, Airbus A340-600 and Boeing 747-400
Second Antonov An-225 Mriya (line no. 01-02) under construction at Aviant-Kiev Aviation Plant. Kiev-Svyatoshino (UKKT), Ukraine, 19 September 2004
Second Antonov An-225 Mriya (line no. 01-02) (side view) under construction at Aviant-Kiev Aviation Plant. Kiev-Svyatoshino (UKKT), Ukraine, 20 August 2008
တမ်းပလိတ်:Antonov aircraft တမ်းပလိတ်:Giant aircraft တမ်းပလိတ်:Outsized cargo aircraft
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အန်တိုနော့ဗ်_အေအန်-၂၂၅&oldid=627103" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၁:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။